Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) - Hello Sayarwon
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း)
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ကဘာလဲ။
Allergic Conjunctivitis (ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် မျက်စိရောင်ရမ်းနာခြင်း) လို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိနာခြင်းဟာ မျက်စိနဲ့ အခြားလှုံဆော်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို allergen လို့ခေါ်ပြီး ကိုယ်ကတုံ့ပြန်တဲ့အခါ allergic reaction ဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ အခြားအရာတွေဖြစ်တဲ့ virus နဲ့ bacteria တွေကိုကာကွယ်ပြီး ရောဂါမဖြစ်အောင်တား ပါတယ်။ မျက်စိနာတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က allergen တွေကို အခြား အရာတွေနဲ့မှားသွားလို့ပါ။ ပြီးတော့ အန္တရာယ်မရှိတဲ့အရာတွေကို ဓါတ်ပစ္စည်းတွေထုတ်တိုက်ပါတယ်။ ဒီအခါ မျက်စိမှာ ယားယံတာ၊ နီတာနဲ့ စိုစိဖြစ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ချို့သူတွေမှာ အရေပြားယားယံတာနဲ့ ပန်းနာရင်ကြပ်ပါဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အတော်လေး အဖြစ်များပြီး မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားလေးတွေထက် ပိုဖြစ်နိုင်ချေ များပါတယ်။ အသကိအရွယ်မရွေးလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုတော့ လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ အခြားအချက်များအတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပငိပါ။
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
မျက်ခွံ ရောင်ရမ်းပြီးထူနေခြင်း(အထူးသဖြင့် မနက်ပိုင်း)
မျက်စိတစ်ဖက်တည်း ဒါမှမဟုတ် နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေမှာ နှာရည်ယိုတာနဲ့ နှာပိတ်တာ နှာချေတွေပါဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတွေမှာမပါတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သိရှိလိုပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအချက်များတွေ့လာပြီဆိုပါက ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ချင်းပြသပါ။
လူတိုင်းရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တွေက လုပ်ဆောငိမှုမတူကြတဲ့အတွက် သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရွေးချယ်ပါ။
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
မျက်စိနာတာဟာ allergen တစ်ခုအပေါ်မှာ ကိုယ်ခံအားရဲ့ ပုံမမှန်တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသောပြသနာတွေက လေထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ allergen တွေကြောင့်ပါ။ဥပမာ :
ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ဟာ အခြားအရာတွေဖြစ်တဲ့ virus နဲ့ bacteria တွေကိုကာကွယ်ပြီး ရောဂါမဖြစ်အောင်တားတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေထွက်ဖို့ အားပေးပါတယ်။။ မျက်စိနာတဲ့သူတွေကတော့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က allergen တွေကို အခြား အန္တရာယ်ရှိတဲ့အရာတွေနဲ့မှားသွားပြီးတော့ တိုက်ထုတ်ပါတယ်။ မျက်စိဟာ allergen နဲ့တွေ့တဲ့ အခါ histimine တွေထွက်ပါတယ်။histimine ဟာယားယံတာနဲ့ မျက်ရည်ထွက်တာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယိ။ ဒါတွေဟာ နှာရည်ယိုတာ နှာချေတာနဲ့ ချောင်းဆိုးတာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
မျက်စိနာတာ တစ်နှစ်ရဲ့ ဘယ်ချိန်ကာလမှာမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအရာဟာ နွေဦး၊ နွေရာသီနဲ့ သစ်ပင်တွေ မြက်တွေနဲ့ အခြား အပင်တွေပေါက်တ့ ဆောင်းဦးကာလတွေမှာဖြစ်တာများပါတယ်။ ဒါ့အပြင် sensitive ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်က allergem တွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီး မျက်စိကို ပွတ်သပ်မိတဲ့အခါမှာ ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အစားအစာကြောင့် ဓါတ်မတည့်တာကလည်း မျက်စိနာတာကိုဖြစ်စေနိုငိပါတယ်။
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မျက်စိနာခြင်းကို ဓါတ်မတည့်ရောဂါစမ်းသပ်မှုနဲ့ ကုသမှုမှာတော်တဲ့ allergist တစ်ယောက်နဲ့ ပြသတာ အကောင်းဆုံးပါ။ သင့်မှာအခြား ဓါတ်မတည့်ပြသနာတွေ ဥပမာ asthma နဲ့ ezema တွေဖြစ်နေရင် allergist နဲ့ ပြသတာအရေးပါပါတယ်။
ဆရာဝန်က ရှေးဦးစွာ သင့် ရောဂါရာဇဝင်နဲ့ လက္ခဏာတွေကို မေးမြန်းပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင်အရေပြားစမ်းသပ်မှု (skin prick test) လုပ်ပြီး ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကို ရှာွေပါလိမ့်မယ်။Skin prick test က အရေပြားကို ခြစ်ယူပြီး သံသယရှိတဲ့ allergem ကို ထည့်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နီရဲဖောင်းကြွနေတာဟာ allergic reaction ဖြစ်တာကိုဖော်ပြပါတယ်။ ဒါဟာ allergist ကို သင်ဘယ်လိုကုသမှုနဲ့သင့်တော်လဲဆိုတာ သိအောင် ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Eye allergies (မျက်စိနာခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျက်စိနာခြင်းကို ကုသမယ့်နည်းကတော့ ဖြစ်စေတဲ့allergen ကိုရှောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင့်မှာ ရာသီလိုက်ဓါတ်မတည့်တာရှိနေရင်တော့ ဒါဟာမလွယ်ကူပါဘူး။ ကံကောင်းတာက ကုသဖို့နည်းများစွာရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆေးတွေက မျက်စိနာတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အခြားလက္ခဏာတွေပါရှိနေချိန်မှာပါ။ ဒါတွေကတော့
antihistamines, such as loratadine (Claritin) or diphenhydramine (Benadryl)
decongestants, such as pseudoephedrine (Sudafed) or oxymetazoline (Afrin nasal spray)
steroids, such as prednisone (Deltasone)
Allergy Shot :
ဆေးသောက်ပြီး မသက်သာရင် allergy shot ကိုသုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ immunotherapy တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး allergen အမျိုးအစားမျိုးစုံကို ဆက်တိုက်ထိုးတာဖြစ်ပါတယ်။allergen ပမာဏဟာ အချိန်ကြာတာနဲ့ တက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းဟာ allergic reaction ဖြစ်တာကို လျော့စေနိုင်တဲ့ body ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
မျက်စိနာတာကို ကုသနိုင်တဲ့ အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့ မျက်စဉ်းဆေးတွေ ရနိုင်ပါတယ်။
မျက်စိနာအတွက် ညွှန်တဲ့ဆေးတွေမှာ olopatadine hydrochloride လို့ခေါ်တဲ့ allergic ဖြစ်ပေါ်မှုကို ချပေးတဲ့ အရာပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆေးတွေကိုတော့ Pataday နဲ့ Patanolဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။
အခြားမျက်ရည်တုလို့ခေါ်တဲ့ ဆေးလည်းရနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးကတော့ allergen တွေကို မျက်စိကနေ ဆေးချပေးနိုင်ပါတယ်။
အခြားမျက်စဉ်းဆေးတွေကတော့ antihistamine or nonsteroidal anti-inflammatory (NSAID) တွေပါဝင်ပါတယ်။ အချို့ဆေးတွေကတော့ နေ့တိုင်းသုံးနေရပြီးအချို့ဟာတွေကတော့ ရောဂါပျောက်ရုံသာ သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်စဉ်းဆေးတွေက စစချင်းတော့ လောင်သလိုစူးသလိုခံစားရပေမယ့် မိနစ်အနည်းငယိအတွင်း ပျောက်နိုင်ပါတယ်။ အချို့အရာတွေကတော့ဆိုးကျိုးတွေပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်နဲ့ သင့်တဲ့ဆေးကိုမသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်ကို မေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
မျက်စိနာကို ကုသဖို့သဘာဝပစ္စည်းတွေကို သုံးတာဟာ ပျောကိကင်းမှု အတန်အသင့်ရှိပါတယ်။ဥပမာ ကြက်သွန်နီအခွံကနေထုတ်တဲ့ allium cepa , euphorbium, နဲ့ galphimia။ ဒီဆေးတွေကို အသုံးမပြုမီမှာ အန္တရာယ်ရှိမရျှိ ပျောက်ကင်းမှုရှိမရှိဆိုတာ ကို ဆရာဝန်နဲ့သေချာမေးမြန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အေးမြစိုစွတ်တဲ့ အဝတ်စကလည်း မျက်စိနာအတွက် သက်သာစေပါတယ်။ တစ်ရက်ကို နာနေတဲ့မျက်စိပေါ်ကို ရေအေးဝတ်အကြိမ်များစွာအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ မျက်စိခြောက်သွေ့တာနဲ့ ယားယံတာကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သိထားရမှာက ဒါဟာ မျက်စိနာစေတဲ့ပြသနာကို ပျောက်ကင်းအောင်တော့ လုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Eye allergies. https://www.healthline.com/health/allergies/eye-allergies#treatment6. Accessed October 23, 2017
Eye allergies. http://acaai.org/allergies/types/eye-allergies. Accessed October 23, 2017
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 18, 2019
ညှို့အားပြင်းတဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မလဲ
လေဆာဖြင့်မျက်စိပါဝါဖျောက်ခြင်း (Lasik Surgery)
နွေရာသီမှာ အဖြစ်များတဲ့ရောဂါ (၅) မျိုး